दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर ! बल्ल बाँच्ने आशा पलायो ! – Sandesh Press
September 22, 2021 264
यस्तै भक्तपुर नगरपालिकामा पनि आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको संख्यामा कमी हुँदैगएको छ । ७५ क्षमताको आइसोलेसनमा अहिले १६ जना मात्र रहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रत्न सुन्दर लसिवाले बताउनुभयो । आइसोलेसनमै बस्न आउने संक्रमितको संख्यामै कमी आएकाले अब आइसोलेसन केन्द्रहरु घटाउँदै लानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको लासिवाले बताउनुभयो ।काठमाडौं । उपत्यकाका केही स्थानीय तहहरुले संक्रमितको संख्यामा कमी हुदैगएको र आइसोलेसन केन्द्रमा बस्ने संक्रमितको संख्या घट्दै गएसँगै आइसोलेसन केन्द्र घटाउदै लगेका छन् । काठमाडौंं महानगपालिकाले संक्रमणको दोस्रो लहरमा छुट्याएको ३५० बेडहरु सबै खाली गरिएको जनाएको छ ।
Prev८ दीनमा भेटीयो सेतिमा टीकटक बनाउदा खसेकी पवित्रालाई ! यस्तो अबस्थामा पानिमा तैरीरहेपछि….
Nextअब मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न पाइने, खुल्ला हुने निर्णयले स्थानिय खुसी